के प्रचण्डलाई कोरोनाको आशंका भएको हो? - Nepal Factcheck
के प्रचण्डलाई कोरोनाको आशंका भएको हो?
फेसबुकका केही ग्रुपहरुमा अहिले प्रचण्ड अस्वस्थ्य भएको र कोरोनाको आशंका भएको समाचार भाइरल भएको छ। समाचारमा गरिएको दावी अनुसार प्रचण्ड केही दिनदेखि बिरामी छन्, उनलाई रुघाखोकीले सताएको छ, अनि कोरोनाको आशंका पनि गरिएको छ।
के साँच्चिकै यस्तो हो त? हामीले फ्याक्टचेक गरेका छौँ।
खासमा यो समाचार एक महिनाअघिको हो। त्यतिबेला प्रचण्ड सामान्य बिरामी भएका थिए। उनलाई मौसमी रुघाखोकी लागेको थियो। यो दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालमा भर्ना हुँदाको समय थियो। यस सम्बन्धमा फागुन २० गते अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित थियो। समाचारमा लेखिएको थियो, ‘प्रचण्ड स्वयम् मौसमी रुघाखोकी लागेपछि अहिले खुमलटार निवासमै आराम गरिरहेका छन् । राजनीतिक भेटघाट घटाएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न भने अस्पताल पुगेका हुन् । प्रचण्डको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार उनले केही दिन सार्वजनिक कार्यक्रम र भेटघाटको कार्यक्रम नराख्न आग्रह गरेका छन् ।’
त्यसैगरी लोकान्तरले पनि ‘प्रचण्ड अस्वस्थ, निको नहुन्जेलसम्म राजनीतिक भेटघाट बन्द’ शीर्षकमा समाचार फागुन २० गते नै प्रकाशन गरेको छ।
एक महिनाअघि पनि सामान्य रुघाखोकी लागेका प्रचण्डलाई कोरोनाको आशंका भन्दै सनसनीपूर्ण समाचार शीर्षक केही अनलाइनले बनाएका थिए।
उदाहरणका लागि फागुन २६ गते सूचना विभागमा दर्ता भएको अनलाइनपाना डट कमले राखेको समाचार शीर्षक हेर्नुस्-
त्यसैगरी अलटपहियरनेपाल डट कमले पनि यस्तै समाचार राखेको थियो मार्च ९ तारिखमा।
यही समाचार कपिपेस्ट गर्दै सूचना विभागमा दर्ता नभएको द टाइम्स नेपाल डट कमले आज अर्थात् अप्रिल १२ मा नयाँ समाचार जस्तो गरी पोस्ट गरेको छ।
यही फेक र भ्रामक समाचार राख्ने साइटहरुका समाचार विभिन्न ग्रुपहरुमा अहिले भाइरल बनाइएको हो।
बीबीसी न्युज नेपाली नामको बीबीसीको लोगो प्रयोग गरिएको भ्रामक फेसबुक ग्रुपमा यो समाचार आज राखिएको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी शैक्षिक सरोकार मन्च नामको ग्रुपमा पनि द टाइम्स नेपालको समाचार सेयर गरिएको छ।
प्रचण्ड अहिले बिरामी छैनन्। प्रचण्ड एक महिनाअघि सामान्य रुघाखोकी लागेर अस्वस्थ भएका थिए। त्यति बेला पनि कोरोनाको कुरा थिएन। त्यसैले फेसबुकमा फैलिएका यी समाचारहरु मिथ्या र भ्रामक हुन्।